Xildhibaan ku tilmaamay go’aankii Xukuumadda Galmudug ee shalay sharci darro – Kalfadhi
Xildhibaan Garaad Yuusuf, oo ka tirsan Baarlamaanka Galmudug ayaa wax lala yaabo ku tilmaamay in Madaxweynaha Galmudug, Axmed Ducaalle Geelle (Xaaf) iyo Reysal Wasaarihiisa, Sh. Maxamed Shaakir Cali, ay ku adkeystaan in ay xilka haynayaan 4 sano, oo ka soo bilaabaneysa markii Galmudug iyo Ahlu-Sunna Waljamaaca ay isku biireen.
Waxa uu sheegay in ay taasi, sida uu hadalka u dhigay, ku keeneyso Galmudug in ay aayaheeda ka tashato. “Arrintaas waxay noqoneysa in Reer Galmudug sidii nimankaas Dhuusamareeb jooga ay uga tashan jireen iney uga tashadaan” ayuu Xildhibaan Garaad ku yiri wareysi uu siiyey Kalfadhi. Waxa uu go’aanka ay shalay sida wadajirka ah u soo saareen Shaakir iyo Xaaf ku tilmaamay mid aan kedis ku ahayn, oo ay sii ogaayeen.
Laakiin, Madaxweynaha iyo Reysal Wasaarihiisa Galmudug waxay sheegeen in ay dooddoodu ku qotonto iney tahay dastuuri, oo aysan sad-bursi dooneen. Dowladda Federaalka, Dowlad Goboleedyada iyo Beesha Caalamka ayey u soo jeediyeen in ay ku xushmeeyaan Galmudug dastuurkeeda. Wuxuuse Xildhibaan Garaad dastuurka ay Xaaf iyo Shaarkir cuskanayaan ku tilmaamay inuusan ahayn kii ay meel-mariyeen, sida uu hadalka u dhigay.
“Dastuurka aan aaminsanahay in ay Galmudug iska leedahay waa Dastuurkii Galmudug ee 2015” ayuu yiri Xildhibaan Garaad. “Dastuurkan uu hadda leeyahay Shaakir waan isku raacnay, meel ay ummadda Galmudug iskula raacday ma jirto” ayuu hadalkiisa raaciyey. Xildhibaanku waxa uu sheegay in xitaa heshiiska ay Ahlu-Sunna Waljamaaca uga mid noqotay Galmudug uusan wali ahayn sharci.
Sikastabase, waxa uu Xildhibaan Garaad Yuusuf sheegay inuu aqbalsan yahay iney muhiimad weyn u leedahay Reer Galmudug in ay isu-tanaasulaan. “Waxa leysaga tanaasulaayo ama lesysugu tanaasulaayo waa in leysla wada ogsoon yahay” ayuu yiri Xildhibaan Garaad. Wuxuu Madaxweynaha iyo Reysal Wasaaraha Galmudug ku tilmaamay in haddii aysan iyagu maamuleen Galmudug ay u arkaan ineysan waxba saxsaneen, sida uu hadalka u dhigay.
Balse, go’aanka ay shalay wada qaateen, shaaciyeenna, Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaalle Geelle (Xaaf) iyo Reysal Wasaarihiisa Sh. Maxamed Shaakir Cali waxaa ku taageersan Xildhibaanno u badan kuwa Ahlu-Sunna-Waljamaaca uga mid noqday Baarlamaanka Galmudug iyo xubno wasiiro ah, oo ka tirsan Xukuumadda Galmudug, iyada oo ay jiraan xubno kale oo ku aragti ah Xildhibaan Garaad Yuusuf.